Gụta ngọzi gị, ọ bụghị nsogbu. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Na ndụ, Omume dị mkpa nke ukwuu. Ọ bụ echiche anyị na omume anyị na-akọwa onye anyị bụ. Omume anyị kwesịrị ịdị oke nke na ọ na-enyere anyị na ndị ọzọ nọ anyị aka inwe ọganihu ma nwee ọganihu. Anyị kwesịrị ibu ụzọ nwee olileanya na ịdị mma.
Anyị ga-eji ike anyị rụọ ọrụ nke ọma ka anyị wee nwee ike too ma nwee ekele maka ndụ dị oke ọnụ ahịa nke enyere anyị. Anyị niile nwere òkè nke mgba, mana isi bụ ịhapụ ikwe ka nke ahụ mee ka anyị daa mbà. Kama, n'oge ndị a, ọ na - enyere nnukwu aka ma ọ bụrụ na anyị agụọ ngọzi anyị.
Mgbe ọdịda ma ọ bụ nsogbu batara anyị, anyị enweghị ike ịhụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị nsogbu ndị ahụ. Kama ọ dị oke mkpa, na n'ụdịdị ọnọdụ a kachasị, anyị ga-elebara ihe niile na ndị a gọziri agọzi anyị anya. Ihe ndị a na-enye anyị ọ joyụ na ike iji die nsogbu anyị.
Ọ na-enye anyị ike ịlụso nsogbu anyị ọgụ n'ihi na anyị ghọtara na enwere ọtụtụ ihe kwesịrị ịlụ ọgụ. E nwere ngọzi na ndụ anyị ịkele ekele maka. Nke a na-eme ka anyị nwee olile anya, lụso nsogbu anyị ọgụ ma gaa n'ihu.
Anyi aghaghi imuta nkuzi site na nsogbu anyi mana anyi ghagide ijigide nwute na egwu so ya ogologo oge. N'ezie, ọ dị mfe ikwu karịa ka emechara eme. Ma ị ga - agariru ma ọ bụrụ na ị nwere ịkpa ike gburugburu onwe gị. Nwere ike ịga n’ihu ma ọ bụrụ na gị onwe gị na-eme ihe ị hụrụ n’anya. N’ihe ndị a niile, cheta dịrị umeala n’obi ma nwee ekele n'ihi ihe nile i nwere.
Ngosiputa ngozi na okwu
Nsogbu Quot na okwu
Nsogbu Kwuru Foto
Ngozi Na Ngozi Chukwu
Quotes na-ewuli elu
Adana mba. Onye ọ bụla nwere ụbọchị ọjọọ, bulie onwe gị, ma gaa n'ihu. - Amaghi ama
Adana mba. Onye ọ bụla nwere ụbọchị ọjọọ, bulie onwe gị, ma gaa n'ihu. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Oge ụfọdụ ịmakụ na-erughị ihe karịrị otu puku okwu. - Amaghi ama
Oge ụfọdụ ịmakụ na-erughị ihe karịrị otu puku okwu. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Mgbe ụfọdụ ọ ka mma imeghachi na-enweghị mmeghachi omume. - Amaghi ama
Mgbe ụfọdụ ọ ka mma imeghachi na-enweghị mmeghachi omume. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Mgbe anyị tinyere nsogbu anyị n’aka Chineke, Ọ na-etinye udo Ya n’ime obi anyị. - Amaghi ama
Mgbe anyị tinyere nsogbu anyị n’aka Chineke, Ọ na-etinye udo Ya n’ime obi anyị. - Amaghi ama…